भ्यान Cleef र Arpels 'भाग्यशाली वसन्त - उच्च गहना सपना
भ्यान क्लीफ र आर्पेल्सको भाग्यशाली वसन्त
वसन्त र यसको र celebrate्ग मनाउन एक रमाईलो नयाँ उत्तम गहना संग्रह।
फ्रान्सेली ज्वेलरी मैसनले नयाँ नाजुक र रंगीन फाइन ज्वेलरी संग्रह: लकी स्प्रिंगको साथ प्रकृतिको पुनर्जन्म मनाउँछ।
लेडीबग, फूल र पातहरू खुशीका पात्रहरू हुन् भाग्यशाली वसन्त। यस संग्रहले वसन्त मनाउँदछ सबै प्रकारको परिष्करण र लालित्य विशेषसँग भ्यान क्लीफ.
यस संग्रहका गहनाहरू दैनिक पोशाकका लागि सूक्ष्म छन् र प्रत्येक पोशाकमा र colorको रमाइलो स्पर्श जोड्नुहोस्।
न्यानो गुलाब सुन, मोतीको सेता आमा, रातो कार्नेलियन, र कालो गोमेद सबै मिश्रण, आफ्नो नजर विवेकीको साथ अझै जीवन्तता संग gracing।
वसन्त फिर्ता भयो र, हामी सबैले सामना गरिरहेका यी अन्धकार समयहरूलाई ध्यानमा राख्दै, केहि बहुमूल्य र colors्ग लगाउन मनपर्दछ!
स comp्ग्रह लेख्ने गहनाहरू एक सौटेर, तीन ब्रेसलेट, एउटा क्लिप ब्रोच र झुलाको एक जोडी हो - सबै भ्यान क्लीफलाई प्रिय प्राकृतिक विवरणहरूको उपस्थितिबाट एनिमेटेड: लेडीबग, फूल र पातहरू।
संग्रहको नाम, भाग्यशाली वसन्त, फ्रान्सेली जौहरीका लागि महत्त्वपूर्ण दुई तत्वहरू पनि संयोजन गर्दछ: भाग्य र प्रकृति। भूतपूर्व भ्यान क्लीफको लागि महत्त्वपूर्ण मूल्य हो, र उत्तरार्द्ध यसको प्रेरणाको सबल स्रोत हो।
त्यसोभए, रमणीय लेडीबगहरूसँग मिलेर, तपाईंले बेर फूलहरू, घाटीको लिली पाउनुहुनेछ र घण्टीहरू - सबै डिजाइन र गुलाबी सुनमा सेट गरिएको छ।
डिजाइन प्रक्रिया र सामग्रीहरू
भ्यान क्लीफको उत्तम गहनाको संग्रहमा, डिजाइन एकदम स्टाइलिज्ड छ, र यो कुनै अपवाद छैन।
डिजाईन प्रक्रियाको बखत, भाग्यशाली वसन्त स's्ग्रहको गहना कम्पोज गर्ने प्रत्येक तत्त्वलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन र डिजाईन गरीएको थियो। यसले रेखाको शुद्धता र भव्यता बढाउँछ।
गहनाका लागि चयन गरिएका सामग्रीहरू प्रकृतिको रंग र जीवन्तता नक्कल गर्न उत्तम फिट हुन्छन्।
कार्नेलियनले यसको पारदर्शी रातो-सुन्तला रंग दिन्छ, गोमेदमा गहिरो कालो टोन र गहन चमक आउँछ, जबकि मोतीहरूको सेतो आमाले यसको नाजुक इरिडसेन्ट बारीकको साथ प्रतिक्रिया दिन्छ। अन्तमा, गुलाब सुनको न्यानोपनले पूर्ण सद्भावको साथ रचनालाई घेर्यो।
भाग्यशाली वसन्त: गहनाहरु
सौटोइर र ब्रेसलेट
भाग्यशाली वसन्त लामो हार, १ mot वटा मूल।
गुलाब सुन, सेतो मदर अफ मोती, कार्नेलियन, गोमेद
भाग्यशाली स्प्रिंग कंगन, mot आकार।
ब्यबहारको ध्यान सधैं अविश्वसनीय हुन्छ, बेर फूलको सुनको पिस्टिलदेखि लिएर घाटीका फूलहरू मोतीको आमाको इरिडसेन्ट शीनदेखि लिएर बत्तीको पातहरूको बनावट गुलाब सुनसम्म।
सबै कुरा पूर्णतावाद र भ्यान क्लीफ र Arpels 'गहना को क्षमता प्रदान गर्दछ।
भाग्यशाली स्प्रिंग कंगन, बन्द पंखों को लागी गोल्ड, कार्नेलियन, गोमेद
भाग्यशाली स्प्रिंग कंगन, खुला पखेटा लेडीबग गुलाब सुन, कार्नेलियन, गोमेद
भाग्यशाली वसन्त ब्रेसलेट। बन्द र खुला विंग लेडीबगहरू
दुई कंगन लेडीबग मनाउँछन्। भाग्यशाली आकर्षणको रूपमा लिइन्छ, एकपटक उनको पखेटा खोलिए पछि, उनी मुटु जस्तो देखिन्छन र मायाको प्रतीक पनि बन्छन्।
यी दुई ब्रेसलेटमा भएका १. 1.5 सेन्टीमिटर लामो छन्, र तपाईं आफ्नो पखेटाको बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको पखेटा वा तपाईंको नाडीबाट उड्नको लागि तयार छ - हामी सोच्दछौं।
धनी रातो कार्नेलियनबाट आउँदछ, जसले टाउकोको कालो गोमेदको साथ कडा भिन्नता सिर्जना गर्दछ। मोती गुलाब सुनले परिष्कृत कन्टूर बनाउँछ।
खुला पखेटाको साथ संस्करणमा, शरीर यसको चमकलाई अझ तीव्र बनाउन मिरर-पालिश गुलाब सुनले बनेको हल्का भाल्टेन्ट तत्वद्वारा रेन्डर गरिएको छ।
क्लिप र झुम्का
भाग्यशाली वसन्त क्लिप ब्रोच र झुम्का।
क्लिप: गुलाब सुन, मोतीको सेता आमा, कार्नेलियन, गोमेद।
झुम्का, बेर खिल: गुलाब सुन, मोती को सेता आमा
क्लिप ब्रोचको रैखिक डिजाईन यसको त्रि-आयामिक आकृतिहरूको लागि अलग देखिन्छ। ब्रुचको र p्ग प्यालेट ईयररिंगको स्वादिष्टता द्वारा पूर्ण रूपमा पूरक छ - एक सुन्दर डेमी-परिमिति।
भनिएझैं, भाग्यशाली वसन्त संग्रहको रत्नहरूले फेरि प्रदर्शन गर्दछ, भान क्लीफ र अर्पल्स जौहरीहरूका महान कलात्मक र कलात्मक क्षमताहरू।
सामग्रीको छनौटबाट मिलान र काट्न, गहनाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक शिल्प शिल्पबाट तिनीहरूको सेटिंग र चमकाने: यी सबै चरणहरू जीवनमा गहनाहरू ल्याउन महत्त्वपूर्ण छन्।
मोती माउन्टको बारेमा सोच्नुहोस्: प्रत्येक सुनको माला हातले काम गर्दछ, एक एक गरी। यसबाहेक, मालाको माउन्टको एक फाइदा भनेको ढुongs्गालाई लुकाएर राख्नु हो। यसले डिजाइनलाई बाधा पुर्‍याउँदैन, र हामी यी रचनाहरूको सन्तुलन पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्छौं।
भ्यान क्लीफ र आर्पल्सको 'लकी स्प्रिंग' खरीदको लागि उपलब्ध छ। उपलब्धताको लागि तपाईंको स्थानीय बुटीक जाँच गर्नुहोस्।
ट्यागराम्रो गहना • भ्यान क्लिफ र Arpels
० मा टिप्पणीभ्यान क्लीफ र आर्पेल्सको भाग्यशाली वसन्त"